Maitiro ekutamba PlayStation mitambo pakombuta yedu neGnu / Linux | Linux Vakapindwa muropa
Kuuya kweSony vhidhiyo yemitambo yekunyaradza kwakapa vashandisi mukana wekushandisa komputa yavo seimwe nzira yekunyaradza, nekuti mitambo yacho yakagoverwa muCD-Rom fomati. Nekudaro izvi zvaive zvakaoma kana zvaisakwanisika kana mavhezheni ekutanga ePlayStation abuda. Asi izvi zvakaitika makore apfuura, chimwe chinhu chakasiyana zvachose neicho chaicho chiripo.
Isu tinogona parizvino kutamba PlayStation Imwe mitambo kubva kukomputa yedu neGnu / Linux. Kune izvi isu tinongoda mutambo wekutanga, muverengi weCD-ROM uye kugoverwa kweGnu / Linux. Kana isu tine izvi zvinhu zvitatu, tinogona kutamba pakombuta yedu.Kana isu tikatevedzera zvakapfuura zvinhu, tinogona kuisa Playstation emulator uye ichave iri mukutarisira kumhanya uye kurodha iyo Playstation mitambo. Nguva ino isu takasarudza iyo PCSXR emulator, Yemahara emulator iyo inowanikwa mune mazhinji eGnu / Linux migove.
Zvichida kune mamwe akazara uye ane simba emulators, asi PCSXR iri mumahofisi epamutemo ezvakawanda zvekuparadzirwa kweGnu / Linux, poindi yakanaka kune chero mhando yemushandisi kushandisa chirongwa ichi, kusiyana nemamwe emulators anoda ruzivo rwemberi.
Kuisa iyo PCSXR emulator
Kana isu Ubuntu, Debian kana zvigadzirwa, isu tinofanirwa kuvhura terminal uye tinyore zvinotevera:
Kana isu Arch Linux kana zvigadzirwa, ipapo tinofanirwa kunyora zvinotevera:
Kana isu Fedora kana zvigadzirwa, ipapo tichaita zvinotevera:
Uye kana isu tine OpenSUSE kana zvigadzirwa, ipapo tinofanirwa kuita zvinotevera:
Kana tangoisa iyo emulator, tinoimhanya uye tisati tamba isu tinofanirwa kuratidza memori kadhi, memori kadhi uko mitambo ichave ichachengetwa. Iyo haifanire kunge iri yemuviri asi isu tinogona kuratidza dhairekitori pakombuta yedu. Kana tangoratidzira memori kadhi, isu tinogona ikozvino kusuma mutambo wevhidhiyo uye kuunakidzwa kubva mukuparadzirwa kwedu kweGnu / Linux.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Maitiro ekuti titambe mitambo ye PlayStation pakombuta yedu neGnu / Linux